किन झ्यालढोका बन्द गरेर हिटर बाल्नु हुँदैन ? | Safal Khabar
किन झ्यालढोका बन्द गरेर हिटर बाल्नु हुँदैन ?
विहीबार, २९ माघ २०७७, ११ : ४८
काठमाडौं । जाडोयाममा चिसोका कारण लगभग सबै मानिसहरु आफ्नो झ्याल ढोका बन्द गरेर सुत्ने गर्दछन् । अझ कतिपय त घरको सबै झ्याल ढोका बन्द गरेर कोठा तताउन हिटर बाल्दछन् । यस्तोमा निसास्सिएर मानिसको मृत्यु पनि हुनसक्छ ।
खासगरी जाडोयाममा अधिकांशले घर, पसल वा कार्यालयमा कोठा तताउन ब्लोअर, हिटर वा कोइला बाल्ने गर्छन् । तर झ्याल ढोका बन्द गरेर कोठा तताउन हिटर, ब्लोअर वा कोइला बाल्दा यो अति नै खतरनाक हुन्छ । यस्तोमा हिटर नबाल्नु भन्ने होइन तर कोठाको भेन्टिलेसन, झ्याल वा ढोका भने खुल्ला हुनु पर्दछ ।
कोठा तताउन प्रयोग गरीने कोइला, दाउरा वा मट्टितेलको हिटर बाल्दा यसबाट निस्कने कार्बनमोनोअक्साइड ग्यासले हामी निसास्सिन्छौं र मृत्यु हुनसक्छ । यस्तोमा कोठाका सबै झ्यालढोका बन्द गरी भेन्टिलेसन नभए त मृत्यु निश्चित जस्तै हुन्छ ।
यो कोठाका अलावा गाडीमा पनि हुनसक्छ । साथै लामो समयसम्म कोठा तातो राखेमा छालमा सुख्खापन पनि आउने गर्दछ । यस अलावा चायाको समस्या पनि बढि मात्रामा देखा पर्दछ ।
किन असर हुन्छ ?
कार्बनमोनोअक्साइड एउटा विषालु ग्यास हो । यो कोइला, दाउरा वा काठ बालिरहेको स्थानबाट आउने भएकाले भेन्टिलेसन नभएको कोठामा स्वास फेर्दा अक्सिजनसँगै यो ग्यास हाम्रो फोक्सोसम्म पुग्दछ ।
कार्बन मोनोअक्साइडले रगतको हेमोग्लोबिनसँग प्रतिक्रिया गर्छ र कार्बोक्सिहेमोग्लोबिनमा परिणत हुन्छ । रगतको रातो रक्तकोष ९आरबिसी०, अक्सिजनभन्दा पहिले कार्बन मोनोअक्साइडसँग प्रतिक्रिया गर्छ ।
त्यसैले अक्सिजनभन्दा कार्बनमोनोअक्साइड धेरै भएको स्थानमा बसेमा रगतमा अक्सिजनको साटो कार्बन मोनोअक्साइड भरिन्छ । यस्तोमा शरीरका मुटु, कलेजो, फोक्सो, मिर्गौलाजस्ता महत्वपूर्ण अंगमा अक्सिजनको कमी भएर हाइपोक्सियाको स्थिति उत्पन्न हुन्छ । फलस्वरुप ती अंगका टिस्यु मर्न थाल्छन् र मृत्यु हुने सम्भावना बढ्दछ ।
यदि सहज स्वास फेरिरहेको कोठामा एकाएक स्वास फेर्दा टाउको दुख्ने, रिंगटा लाग्ने, वाकवाक लाग्ने, उल्टी हुन खोक्नेजस्ता लक्षण देखिए वा सास फेर्न कठिन भए र आँखा पोलेमा हत्तपत्त खुल्ला हावामा निस्कनुहोस् ।
कोठा तताउन प्रयोग भएको हिटर, कोइला, दाउरा वा ब्लोअर निभाउनु होस् । झ्यालढोका बन्द भएको कोठामा कोइला वा दाउरा नबाल्नुहोस् । साथै लामो समयसम्म हिटर वा ब्लोअरको अत्यधिक प्रयोग गर्नु पनि हुदैँन ।